निराशाको दबाई::local sandesh
इलाम अन्त पनि बनाउन सकिन्छ । सायद इलामको सबभन्दा ठूलो विशेषता यही हो ।
केदार शर्मा / बुध, पुस २६, २०७४
इलाम । राति पानी परेको थियो । बिहान पारि भारतको जोरबङला मास्तिरबाट उदाएको घाम खर्साङ मास्तिर पुग्दा नपुग्दै हामी चिया टिप्न थालिसकेका थियौँ ।
डाँडा उज्याला थिए, तर तल बिरिङखोलातिरबाट उठेको कुहिरोले एकैछिनमा घाम छेक्ने लक्षण थियो । वरिपरि भने हामी यहीँ बस्ने मान्छेलाई समेत नौलो लाग्ने, हरियालीको समुद्र भने हुने परिवेश थियो । चिया टिप्दै गरेका हाम्रा अतिथि दुईजना डेनिस युवक आफ्नै भाषामा कुरा गर्दै थिए, सल्लाहा गरे जसरी नै मतिर फर्किएँ, एकजनाले भने, ’रेडियो एक्टिभ ग्रिन !’
उनीहरूलाई हाम्रो हरियाली विकिरणको संकेत गर्न प्रयोग गरिने चर्को हरियो रङ वा युरेनियम ग्लासको जस्तो लागेछ, ’यस्तो धपधपाउँदो हरियाली हामीले देखेकै थिएनौँ । फोटो देखाउँदा धेरैले त यसलाई रङ थपेको भन्छन् ।’
हरियो रङका अनेक छायामध्ये यो, चियाको मुनाको छाया साँच्चै नै ’ज्यूँदो’ लाग्छ मलाई पनि । उनीहरूको कुरामा सही थाप्दै भनें, ’यो दिव्य हरियाली यत्तिकै त तिमीहरू डेनमार्क र्पुयाउन सक्दैनौ । तर यसबाट निस्केको सुनौलो पानीको स्वाद र सुगन्ध चाखेपछि त यो लर्तरो हरियालीबाट निस्केको होइन भनेर पत्याउलान् नि !’ पारि अर्को चियाबारीमा चिया टिप्दै गरेका मध्येकी एउटी महिला कराइन्, ’ए, फुर्बा हौ, चारोटा बोरा पनि लिँदै आइज है !’ हाम्रा पाहुना हाँसे । मैदानी देशका उनीहरूले त्यो ’डाँडापाखा सञ्चार’ रमाइलो माने । लाग्यो, मान्दा रमाइलो सबैतिर छ ।
यो पहिलो टिपाइको चिया उनीहरू आफ्नै हातले माड्छन्, सुकाउँछन् र ’आफैँले बनाएको’ चियाको कोसेली लिएर घर जान्छन् । अलिकति उनीहरू हामीसित किन्छन्, अलिकति चाहिँ उनीहरूका बा आमालाई हामी उपहार हालिदिन्छौँ । यही मेसोमा थप्छु, तीमध्येका एकजनालाई गुन्दु्रक साह्रै मनर्पयो र उसले आफैँ अलिकति गुन्दु्रक पनि हालेको छ, सुकाएर घर लैजाने योजना छ ।
हाम्रो सानो र पूर्णतः अग्र्या्निक चियाबारीको उत्पादन फ्याक्ट्रीहरूलाई बेच्न पोस आउँदैन । त्यसैले हामी पाहुनालाई चिया टिप्न दिन्छौं, ओइलाउन माड्न सिकाउँछौं, सुकाउन सघाउँछौँ । हेर्दा हेर्दै एक नम्बरको चिया तयार हुन्छ । उनीहरूले रमाइलोसित, आफ्नै हातले बनाएको चिया एकदम सस्तो मोलमा पाउँछन् । हामीले ’सित्तैका खेताला’ त पाउँछौँ नै, चियाको मोल पनि बजारमा भन्दा राम्रो पाउँछौँ । सबैले जित्ने खेल यसरी चल्छ ।
पाहुना नभएका बेला पनि हामी सकभर आफ्नो बारीको चिया आफैँ बनाउँछौँ, सुकाउँछौँ र बेच्छौँ । हातले बनाएको चिया, जसलाई यता हातेपत्ती भनिन्छ, मेसिनको जस्तो एकनासे र हेर्दा राम्रो हुँदैन । तर यसका पारखीलाई यही मनपर्छ । मगमग बास्ना आउने सुनौलो चिया पिउँदा मलाई सुनमा सुगन्ध भनेको यही होलाजस्तो लाग्छ । यस्तो चियालाई बेलाइतीहरूले किन ’ब्ल्याक टी’ भनेका होलान् भन्ठान्छु । इलाममा हामी रातो चिया भन्छौँ । खासमा त यो रातो पनि होइन । यो सुनौलो हो ? कि यसलाई सुन्तला रङ भन्ने ? म पाहुनाहरूसित ठट्टा गर्छु, ’यसलाई जे भने पनि हुन्छ, ब्ल्याक टीचाहिँ नभनिदिनुहोला । तपाईंका बालबच्चाले कालो रङ नै नचिन्लान् ।’
हाम्रो छिमेकको ’अलमस्ट हेभन’ फार्मकी स्विस क्यानेडियन ’फुपू’ लिज ग्याजलाई अघिल्लोपटक आएका बेला हामीले सौन्दर्य प्रसाधनका रूपमा प्रयोग गर्न हरियो चियाको ढुटो दिएका थियौँ । उनले यसपटक आउँदा भनिन् त्यसको प्रयोग गर्दा क्यानाडाको शुष्क हिउँदमा पनि उनको अनुहारको छाला सुक्खा भएन रे, एकदम गजब भयो रे ! फेरि मागेकी छन् । चियालाई जापानमा जस्तै खाद्य पदार्थ र सौन्दर्य प्रसाधनका रूपमा प्रयोग गर्ने हाम्रो सपना अघि बढ्ला जस्तो छ । हाम्रो चिया पर्यटनले गति लेलाजस्तो छ ।
इलाम बस्न थालेपछि हामीलाई धेरै साथीहरूले भनेका छन्, ’हामी पनि आउँछौ है ?’ यो हामीलाई एकदम मन पर्ने प्रश्न हो, किनभने यसको जवाफ सजिलो छ । हामी दंग परेर ’हस्’ भन्छौं । कतिजना आएका पनि छन् । हामीले पनि सक्दो स्वागत सत्कार गरेका छौँ । तर कसैले, ’इलाम किन आउने ?’ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्न खोज्छ । म अहिले त्यही प्रश्नको जवाफ दिने कोसिस गर्छु ।
इलाम जिल्लामा एउटा पनि हिमाल नभएकाले यहाँबाट सितिमिति हिमालको दर्शन पाइँदैन । यहाँ ठूला तालतलैया र नदी छैनन् । इलामको पर्यटन नक्सामा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रहेका मन्दिर, डाँडाकाँडा आदिको सूची दिइए पनि कमै मात्र पर्यटक ती ठाउँमा धाएर पुग्छन् । यहाँ खप्तडको जस्तो विशिष्ट भू बनोट छैन, चितवनको जस्तो जंगल छैन । तनहुँ वा खोटाङमा जस्ता नामी गुफा छैनन्, जनकपुर वा लुम्बिनीमा जस्तो राष्ट्रिय विभूतिहरूको जन्मेका संकेत र प्रमाणहरू छैनन् । यो जिल्ला गोरखा र नुवाकोट जसरी राष्ट्रिय इतिहाससित जोडिएको छैन, यहाँ काठमाडौँका जस्ता मन्दिर वा प्युठान, सुनसरी वा मुस्ताङका जस्ता धार्मिक महत्त्वका धाम पनि छैनन् ।
अलि बढी नै फुर्किएजस्तो नमानिदिने भए म भन्छु इलाममा नेपालीहरूको साझा रोग( निराशाको दबाई छ । असोजदेखि वैशाख जेठसम्म इलाम पर्यटकहरूको पदचापबाट गुन्जायमान रहन्छ । चारआलीदेखि इलाम बजारसम्मको ८० किलोमिटर सडकमा दिनहुँ बीसौँ पर्यटक बसहरू आवतजावत गर्छन् । विद्यार्थी, किसान, साना उद्यमी, सहकारी आदिका अध्ययन भ्रमणका ब्यानर टाँगिएका बसहरू बाहेक धेरैथरी साना गाडी र मोटरसाइकलमा पनि इलाम घुम्ने पाहुनाहरू आउँछन् । घुमफिर गर्छन्, सिमानासम्म पुग्छन्, कति त पारिका दार्जि्लिङ मिरिक पनि पुग्न भ्याउँछन् ।
कतिले मलाई ’पाहुनालाई पारी पठाउनु हुँदैन, नेपालमै कति राम्रा कुरा छन्’ पनि भनेका छन् । मचाहिँ, कम्तीमा पनि पर्यटनको मामिलामा पटक्कै राष्ट्रवादी छैन । हामी जसरी नै अरू पनि ’राष्ट्रवादी’ भएर आफ्नै देशमा घुम्न थाले भने के गर्नुजस्तो लाग्छ । इलामबाट मेची नदी नतरी भारत पुगिन्छ, यहाँ आउनुहोस्, मन भए पारी पनि जानुहोस् भनेँ भने नै हाम्रो विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिको लाभ लिन सकिन्छ र पाहुनालाई न्याय हुन्छजस्तो लाग्छ ।
तर यो सजिलै वारिपारि गर्ने सुविधा पनि इलामको आकर्षण होइन । चारआलीबाट उत्तर लाग्दा झापाको उत्तरीभाग, बर्नेका चियाका बोटहरूले स्वागत गर्दै उत्तर पठाएका पाहुनालाई इलाम छिर्दा्छिर्दै शीतल हुन थाल्छ । आँखाले चियाको अनुशासित हरियालीको आनन्द उठाउन थाल्छन् । अगाडि बढ्दै जाँदा चियाका फ्याक्ट्रीहरूबाट अटेसमटेस भएर निस्केको ताजा चियाको सुगन्धले मोहनी लगाउँछ । अदुवाको तिख्खर ताजापन, अकबरे खोर्सानीको गजबको पिरोपन रोज्नुहुन्छ कि दूधका परिकारहरूको मधुरता, जिब्रोलाई आनन्द दिने कुरा पनि धेरै छन् । कानलाई झ्याउँकिरीको अविराम संगीत । इलाममा तपाईंका सबै ज्ञानेन्द्रियलाई सुन्तष्ट पार्ने कुरा उपलब्ध छन् ।
वर्षाका चार महिना, जुन बेलालाई सामान्यतः नेपाली पर्यटनको ’अफ सिजन’ मानिन्छ, त्यसबेला इलाममा यहाँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ’नेचुरल प्रोडक्ट’ तयार हुन्छ । त्यो विशिष्ट उपहार हो यहाँको शीतल मौसम, जसका ग्राहक छिमेकका झापा, मोरङ वा सीमापारिका सिलिगुडी क्षेत्रमा प्रशस्त छन् । सिमसिमे झरीमा बर्सादी स्याहार्दै चिया टिप्नु र तात्तातो चिया खाजा खानु, चिया माड्नु, सुकाउनु, कहिलेकाहीँ घाम लागेन भने रिसाउँदै अँगेनामा कराही बसाएर चिया भुट्नु यस्ता कुरामा रमाइलो मान्नेका लागि इलाममा कहिल्यै सिजन अफ हुँदैन ।
तर दुर्भाग्य, मानिसहरू हतार हतार इलाम आउँछन्, गाडी रोक्छन्, फोटो खिच्छन् । नेपालमा सबैतिर खान पाइनेजस्तो खानेकुरा खान्छन्, अलिअलि कोसेलीपात किन्छन् र फर्किन्छन् । मलाई भने बेमोज लाग्छ । लाग्छ, इलामको बाटो हेर्नमा मात्र खर्च भयो नि यिनको समय र पैसा । बाटामा त इलाम अलिकति मात्र छ । इलाम हेर्न त गाउँमा पस्नुपर्छ । तर यो पाहुनाको दोष होइन । हामीले आफ्ना विशेषताहरू बताउन, मार्के्टिङ गर्न नसकेको हो । पाहुनालाई गाडीबाट ओरालेर इलाम देखाउन हामीले कहिले सकौँला !
देश खत्तम भयो भनेर चिन्ता लाग्छ ? चिन्ता नगर्नुहोस् । चिन्ता गरेर केही फाइदा छैन, बरु इलाम आउनुहोस् र सिमानामा उभिएर वारिपारि हेर्नुहोस् । दिक्क लाग्दैन, बरु गर्व लाग्छ । बेलाइतीहरूले झन्डै दुई सय वर्षअघि सुरु गरेका पारीका चिया बगान र यता, तीस वर्ष यता, किसानकै बाहुबलमा फैलिएको चियाबारी तुलना गर्दा आनन्द लाग्छ । भौतिक सुविधा, घर, मोटरसाइकल, मोबाइल फोन, पसलमा राखेका सरसामान आदि हेर्दा मान्छेलाई पुगिसरी आएको देखिन्छ । पहिले अलैँची र अहिले चियाले ढाकिएका पाखाहरूबाट भूक्षय नगण्य मात्रामा मात्र हुने भएकाले अन्तका तुलनामा यहाँका खोलानाला मध्य बर्खामा पनि नधमिलिई बग्छन् । चारैतिर घाँसैघाँस छ । दैनिक एक लाख लिटरभन्दा बढी दूध बजारमा जान्छ । चियाको याममा यहाँका हरेक गाउँबाट दैनिक हजारौं किलो हरियो चिया बेचिन्छ । तरकारी, कुचो, चिज, छुर्पी र थरीथरीका दुग्धपरिकार आफ्नो आवश्यकता र सुविधाअनुसार यहाँबाट लाने कोसेलीपातको सूची लामो हुन सक्छ ।
इलाम आउने इलम हेर्न हो । यहाँ साधारण मान्छेले गरेका साधारण काम र त्यही कामले सिर्जना गरेको सौन्दर्यको रसास्वादन गर्न हो । इलाम आउने प्रत्येक पर्यटकलाई हामी आँट गरेर भन्न सक्छौँ, इलाम एउटा सामान्य मध्य पहाडी जिल्ला मात्र हो । झन्डै डेढ शताब्दी अघि सुरु भएको सदरमुकामको एउटा चियाबारी बाहेक ३० वर्ष अघिसम्म पनि यहाँ आगन्तुकहरूलाई लोभ्याउने अरू खासै कुरा थिएनन् । कन्याममा चिया रोपिएको भर्खर ४० वर्ष नाघ्दै छ । दूध बिक्री हुन थालेको ३० वर्ष पनि पुगेको छैन । सरकारी बगान बाहिर चिया रोप्ने काम सुरु भएको २५ ३० वर्ष हुँदै छ ।
इलामको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता ’रिप्लिकेबलिटी’ हो । यहाँ हेर्ने कुरा जति छन् त्योभन्दा बुझ्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा बढी छन् । नेपालमा जहाँ पनि अर्को इलाम बनाउन सकिन्छ । हामीले आँटै गरेर भन्छौँ, इलाममा विकासको बीउ पाइन्छ तर त्यो बीउ किन्न भने विकास रोप्न चाहने व्यक्ति आफैँ यहाँ आउनुपर्छ । ’इलाम विकसित भइसक्यो’ भन्न खोजिएको होइन, तर यहाँ ग्रामीण विकासको राम्रा मोडलहरू भने निश्चित रूपमा तयार भइरहेका छन् ।
इलामले सबै ग्रमीण समुदायहरूलाई विकासको एउटा मोडल दिन सक्छ । तर यो विकास सिक्ने स्कुल मात्र पनि होइन । यहाँका सुन्दर चियाबारी, छिनछिनमा फेरिइरहने मौसम, फरासिला मान्छे र नेपाली खाद्यबजारमा चढ्न बाँकी नै रहेका परिकारहरूको स्वाद जसका लागि पनि उत्तिकै प्रिय र मनमोहक हुन्छ । गाडीबाट ओर्लिएर यहाँका गाउँघर र पुराना बजार र साप्ताहिक हाटहरू घुम्नुहोस्, तपाईंलाई पनि कवि भूपी शेरचनका शब्द दोर्होयाएर भन्न मन लाग्छ,
’थुम्का थुम्का चिया र झुम्का झुम्का अलैँची उमारेर
हरियो भरिलो इलाम देख्दा
अलिअलि इलाम छर्न मन लाग्यो ।’
चैत्र २९, २०७० मा कान्तिपूरबाट